Amulite CO2 XPS Tsipika famokarana sombin-javatra
Fampidirana teknika I
Voalohany, manambatra symmetrical1y XPS fitaovana miaraka amina mpanampy hafa toy ny mpiorina nukleanty sy ny loko andiany; Faharoa mametraka azy ireo ao anaty hopperan'ny Grade Iextruder amin'ny fantsom-bovoka automatial1y; Fahatelo miempo sy mametaka resina byspecial1y natao visy symmetrika, ary miaraka amin'izay dia mampiditra tsindry bokotra amin'ny alàlan'ny tsindry mafy sy fampifangaroana amin'ny resina voarendrika; Fahefatra, mametraka azy ireo ao amin'ny rafitra Grade IIextrusion ho meit, afangaro, ampio tsindry ary hangatsiaka indray ary esory ny volon-koditra vita amin'ny plastika manokana ho an'ny tabilao, avy eo mangatsiaka sy mamorona birao amin'ny alàlan'ny famafana sy famolavolana..kifthly. mametraka ny solaitrabe ao amin'ny rafitra kilasy faha-I ary mamindra azy ireo amin'ny rafitra draw-off Grade Il amin'ny alàlan'ny fitaterana rol1s; Fahenina, manapaka ny sisin'ny fako amin'ny sisiny roa sy mamarana ny fanapahana volo arakaraka ny halavany 1 halavany; ny dingana 1ast, fametrahana ary fitehirizana.
Calcium Silicate Board / Fiber Cement Board
Miaraka amin'ny vokatra vita amin'ny simenitra vita amin'ny fibre amin'ny fampiasana indostrialy amin'ny fananganana sy ny haingon-trano,
Maivana EPS Cement Sandwich Wall Panel Machine dia amboarina Araka ny firoboroboan'ny tsena ankehitriny amin'ny tsenan'ny fananganana fitaovana vaovao, ny orinasanay dia mamolavola ny fomba fanavaozana vaovao ny tsipika famokarana mandeha ho azy, izay afaka mamerina ny rano maloto sy ny fako ampiasaina amin'ny alàlan'ny fomba be pitsiny; Ny zavamaniry eto amintsika dia afaka mamono ho azy, izay afaka mitsitsy vola be amin'ny asa.
Ny famokarana takelaka vita amin'ny tafo vita amin'ny savony vita amin'ny simenitra dia namolavola lalina ary be mpampiasa mandritra ny 30 taona mahery.
Base Panels: Birao simenitra vita amin'ny fibre na birao misy silikasy amin'ny kalsioma ； Base Panels Surface dia lemaka.
Biriky mandeha ho azy manao tsipika famokarana
Ny milina fanamboarana sakana AM4-15C no fitaovana fanaovan-tsolosaina fanamboarana mandeha ho azy namboarina, miaraka amin'ireto toetra manaraka ireto